Fitandremana amin'ny fampiasana fandriana hopitaly elektrika
avy amin'ny admin tamin'ny 21-01-25
Fenitra famokarana fandriana hopitaly China Electric
1. Ny loha sy ny tongotry ny fandriana hopitaly elektrika dia mamolavola amin'ny plastika injeniera ABS, miaraka amin'ny bika mahafinaritra, mora ny mamaky sy mamoaka entana, fanoherana ny fiatraikany, fanoherana ny hafanana, fanoherana ny hafanana ambany, fanoherana simika ary fananana elektrika. 2. Ny velaran'ny fandriana amin'ny herinaratra ...
Nomena mari-pahaizana lehibe an'ny trolley Hydraul Stretcher i Annecy
Tamin'ny volana oktobra 2018 dia nahazo mari-pankasitrahana trolley mihombo amin'ny hopitaly avy amin'ny mpanjifa Ekoatora i Annecy, totalin'ny 200 pc. Ao anatin'izany ny 100 pcs ny karazana sisin-tsarimihetsika pp, ary 100 pcs ny karazana lalamby alimika alimo. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tadiavinay. ...
Famaritana ny fampiasana fandriana mpitsabo
Sarety Trolley fitsaboana, Trolley hopitaly, Trolley fitsaboana miaraka amin'ny vatasarihana, Trolley mpitsabo mpanampy tsy misy tariby, Trolley laptop, Trolley Medical,